China Pee mapedhi Kugadzira uye Fekitori | Bondhot
ZVIMWE ZVITANhatu runyorwa nziyo:
1: Jira risina kurukwa;
Yechipiri: Bepa repamusoro rezvinyama;
Yechitatu: USA inotorwa Fluff pulp: Iyo fluff pulp inotengeswa kubva kuUSA,
inotangira kuNorth America
Yechina: Super inopinza polymer: pinza uye kiya zvinwiwa. inoshandura mvura kuva gel;
5th: Bepa rechitunha;
6th: Pe firimu pasi: kudonhedza humbowo uye husina mvura PE liner kudzivirira mvura kunyura mukati pasi;
Masikirwo akakurumbira aripo
Maodzanyemba eEast musika S: 45x33cm, M: 60x45cm, L: 60x90cm;
South Korea musika 40x50cm, 60x75cm
America musika 21x21inch, 22x22inch, 23x23inch, 24x24inch; 27.5 × 35.8inch
Europe musika 60x60cm, 60x90cm;
Vamwe Seizvo zvinodiwa nemutengi.
1. Kana iwe uchida kugadzira ichi chigadzirwa pane chako chakavanzika chitambi, isu tinopa yekufa-cheka (checheka mutsetse) kune yako dhizaini mareferenzi ese ari maviri mabhegi uye bhokisi. Iwe waizopa iyo package graphic kana yawanikwa chete, isu tichagadzira yekudhinda vhezheni yako yekusimbisa. Uye nyowani mapakeji kugadzirwa kunoenderera mushure mekutenderwa kwako.
Nepo Yakavanzika label yekuvandudza mutengo iri shoma padiki pakutanga nekuda kwekudhinda ndiro yemutengo uye kudhinda MOQ. Saka kana iyo yakavanzika chitupa isinga fanirwe, isu tinoda kukurudzira yedu brand uye iripo package yeako mareferenzi.
3. Bvisa bhegi + kadhi rine mavara / chinamira, zverudzi urwu, unogona kupurinda LOGO yako pakadhi / chinamirwa.
4.Color bhokisi. Kana iyo pasuru yakaverenga inopfuura 100pcs, bhokisi remavara iri sarudzo iri nani. Ruvara bhokisi harina kudhinda ndiro yemutengo asi iyo MOQ ndeye 2000pcs.
Iyo yekunze pasuru ndeye kraft-ruvara yakapetwa kaviri mabhokisi makatoni ayo anomhanya anodonhedza- bvunzo usati waendesa. Carton bhokisi rakasimba kwazvo, Hunhu hwakachengetedzwa kugungwa nekutakura
6.Expiry zuva reiyo chigadzirwa makore matatu.
30% T / T sedhipoziti, iyo yasara 70% inopesana nekopi yeB / L.
8. Ndeapi ari mushure mekutengesa, kudzoka uye mutemo wechivimbiso?
Mhinduro yako yezvigadzirwa zvedu inozokosheswa. Unogona kubata vatengi vedu kune chero mibvunzo. Isu takanyatso tarisa mhando kutonga manejimendi pre-, on- uye mushure mekugadzirwa. Zvikanganiso zvese zvinomuka zvinofanirwa kugadziriswa neyakajairwa indasitiri uye zvichagadziriswa kuburikidza nekutaurirana kwakanaka. Tichaongorora chikonzero uye togadzirisa mhinduro yekusangana nechikumbiro chako
9. Ndedzipi nzira dzekutumira, chiteshi chekutanga uye yakajairwa nguva inotungamira
Zvigadzirwa zvedu zvinotumirwa negungwa kutakura zvinhu zveFCL / LCL.
Yekutanga chiteshi ndeye Qingdao, China, saka mazwi edu ariwo paFOB Qingdao hwaro.
Yakajairwa inotungamira nguva mazuva makumi matatu pane dhipoziti risiti. (yekugadzira, kusanganisa iyo yekufambisa nguva)
10. Kugadzira kugona:
Parizvino, isu tine matatu ekugadzira mitsara uye yedu yekugadzira inokwana inopfuura makumi masere midziyo / mwedzi, isu tinowedzera imwe yekumhanyisa-yekugadzira tambo uye yekugadzira inokwana inosvika zana makombi muna 2020
Yekutanga odha, iyo nguva yekutungamira ingangoita mazuva makumi mashanu nemashanu nekuda kwepakeji yemifananidzo yekusimbisa uye pasuru nyowani yakadhindwa, uye nguva yekuendesa yemirairo inotevera ichave iri mukati memazuva makumi matatu.
Q1.Wakambotumira kune chero nyika zvisati zvaitika?
A: Hongu, musika mukuru weBondot uri muUSA, uye isu zvakare takatumira kuAustralia, England nedzimwe nyika dzeEurpean zvisati zvaitika.
Q2.Iyo yakareba sei fekitori yako ichiita bhizinesi rako?
A: Fekitori yedu inotanga kugadzirwa kwayo kwemhuka dzinovaraidza kubvira 2016, anga ave makore mashanu echiitiko, isu takasaina neGlobalso kuti tiwedzere bhizinesi redu.
Q3.Iwe une chero zvigadzirwa zvirimo? Iwe unotsigira ODM?
A: Tine chakasimwa chezvipfuyo zvezvipfuyo mudura uye takagadzirira kutumira anytime.you unogona kukumbira yedu yemasheya runyorwa kune ako mareferensi. Isu tinotsigira ese ODM uye OEM.
Q4.Can iwe ungandipa iyo sampuli yechigadzirwa kuti titarise kana bvunzo usati waenderera mberi nekutaurirana?
A: Ehe, kuve nechokwadi kuti iwe unogona kuwedzera bhizinesi rako munzvimbo yako unogamuchirwa kuodha yemahara sampuro yechigadzirwa chako
Iwe unongofanirwa kubhadhara mutengo wekutumira kune ese masampuli.
Q5.Iwe unoita sei iwe gurantee bhenefiti yedu kana ini ndiri kuzoisa odha?
A: Vatengi vanokurudzirwa kuisa odha mushure mekutarisa yedu pads yekuenzanisira, kuti gurantee divi rako rekubatsira zvakanyanya sezvinobvira, zvakare unogamuchirwa kuti utarise fekitori yedu chero nguva uye unzwe wakasununguka kubvunza chero mibvunzo kukutengesa kwedu.
Q6.Ndingawane rini mutengo?
Mukati memaawa makumi maviri nemana mushure mekunge tawana kubvunza kwako.
Q7 .Ndinotarisira kuti ndiwane muyenzaniso kwenguva yakareba sei?
Mushure mekubhadhara muripo wekuenzanisira uye titumire mafaera akasimbiswa.Iyo mienzaniso ichave yakagadzirira kuendeswa mumazuva manomwe kusvika gumi.Masampuli anozotumirwa kwauri kuburikidza nekutaura uye kusvika mumazuva 3-5.Ungashandisa yako pachako nhoroondo account tidzorere kana usina account
1,30% TT dhipoziti, 70% chiyero pamberi pekusununguka
2.30% TT dhipoziti, iyo bharanzi B / L.
3.100% TT pamberi
Q9. Tinogona here kuwana rutsigiro kana tiine yedu pachedu chinzvimbo?
Pls inotizivisa yako yakajeka pfungwa pane yako musika kudiwa, isu tichakurukura uye nekupa zano rinobatsira iwe.to kuwana yakanakisa mhinduro kwauri
Pashure: Anoraswa machira emachira
Zvadaro: Puppy traing mapedhi